Hoos u dhaca ku yimid Real Madrid oo Man United ku dhiirrigelinaya inay sameyso heshiis weyn – Gool FM
(Yurub) 08 Luulyo 2020. Sida laga soo xigtay shabakada “le10sport” ee dalka France, kooxda Manchester United waxay dooneysaa inay ka faa iideysato dib u dhaca ku yimid heshiiskii ay Real Madrid ku dooneysay laacibka naadiga Borussia Dortmund ee Erling Haaland.
Shabakada ayaa waxay tilmaamtay in Erling Haaland uu xiiseynayo inuu sii joogo safka kooxda Borussia Dortmund xilli ciyaareed kale, maadaama tan iyo markii uu yimid uu ku soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah.
Laakiin Red Devils ayaa ku cadaadin doonta Erling Haaland, si ay uga dhaadhiciso mashruucooda, isla markaana aysan sugin xagaaga soo socda, maadaama ay ka cabsi qabto inay ku bataan kooxaha ku tartamaya adeegiisa.
Si kastaba ha noqotee, Erling Haaland ayaa ku dhawaaday inuu ku biiro kooxda Manchester United, bishii Janaayo ee la soo dhaafay, kahor inta uusan go’aansanin inuu ku biiro kooxda Borussia Dortmund.
In kastoo tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane uu la dhacsan yahay qaab ciyaareedka weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund ee Erling Haaland, hadana hoos u dhaca dhaqaale uu sababay Coronavirus, ayaa ka dhigtay inay dib ugu dhacaan Los Blancos heshiiska Haaland.